कहीँ तपाइँको कानको बाहिरी भागमा प्वाल त छैन ? – ramechhapkhabar.com
तपाईले कहिले ध्यान दिनु भएको छ ? कानको बाहिरी भागका प्वाल हुन सक्छ । यो प्वाल यति सानो हुनसक्छ कि तपाईले यसमा ध्यान दिनु भएको छैन । यदी तपाइलाई विश्वास छैन भने कसैलाई आफ्नो कान देखाउनुस् । तपाईको कानको माथिल्लो भागमा सानो प्वालको निशान पाउनुहुनेछ ।
यसलाई प्रीआरीकुलर साइनल भनिन्छ । धेरै जसो मानिसको यो प्वाल विस्तारै पुरिदैँ जान्छ । तर केही प्रजातीमा दश प्रतिशत भन्दा धेरैको कानको यो प्वाल हराउँदैन । यो प्वाल जन्मजात नै हुन्छ । जो कानको बाहिरी हिस्समा देखिन्छ ।
अध्ययनहरुका अनुसार यो वायाँ कानको तुलनामा दायाँ कानमा धेरै पाइनछ । वास्तवमा आमाको पेटमा जब भ्रुणको विकास सही रुपमा हुन सक्दैन तव यो प्वाल बन्न जान्छ । जीव वैज्ञानिक नील शुविनका अनुसार यो माछाको फुल्काको अवशेष हुनसक्छ । अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार यो प्वाल अनुहार र मासु ठीकसँग नजोडिएका कारण बनेको हो ।
टमाटरबाट भिटामिन सी, लाइकोपीन, भिटामिन, पोटाशियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । साथै यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । मानिसलाई वजन घटाउन पनि गोलभेडा फाइदाजनक छ । तर टमाटरको सवैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको पकाउँदा पनि त्यसको पोषक तत्व जादैन ।
टमाटरको प्रयोगले कयौं रोगको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । विहान पानी नपिइकन पाकेको टमाटर खादा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा पुग्छ । यदी बच्चालाई सुख्खा रोग भएको खण्डमा प्रत्येक दिन एक गिलास टमाटरको जूस पिलाउदा बिरामीबाट आराम मिल्छ । बच्चाको मानसकि तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर बहुत फाइदाजनक हुन्छ ।
गर्भावस्थामा टमाटरको सेवन गर्न बहुत फइदा हुन्छ । यदी पेटमा जुका वा अन्य किरा भएको खण्डमा टमाटरमा मरिच मिसाएर खादा फाइदा हुन्छ । काचो टमाटरमा कालो नून मिलाएर खानाले अनुहारमा चमक आउँछ